လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: ရုရှားမှ ဂျော်ဂျီယာသို့ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုရပ်တန့်ခြင်း (၁၃-၈-၂၀၀၈)
ရုရှားမှ ဂျော်ဂျီယာသို့ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုရပ်တန့်ခြင်း (၁၃-၈-၂၀၀၈)
ရုရှားသမ္မတ Mr. Dmitry Medvedev က ဂျော်ဂျီယာသို့ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကို အဆုံးသတ်ရန် အမိန့်ပေးကြောင်း Kremlin မှ ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကြေငြာချက်သည် ပြင်သစ်သမ္မတ Nicolas Sarkozy က ရုရှားသမ္မတနှင့်တွေ့၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအလားအလာအတွက် စေ့စပ်ဆွေးနွေးရန် မော်စကိုသို့ မရောက်မီ မိနစ်ပိုင်းစော၍ ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်သစ်သမ္မတက ရုရှားသမ္မတ၏ ကြေငြာချက်သည် မိမိတို့မျှော်လင့်နေသည့် ကြေငြာချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ကြေငြာမှုသည် မိမိတို့အတွက် သတင်းကောင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ရုရှားသမ္မတ၏ ကြေငြာချက်သည် ဂျော်ဂျီယာ၏ သီးခြားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တောင် Ossetia ဒေသတွင် ဂျော်ဂျီယာ တပ်မှ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်မှု စတင်သည့်နေ့မှစ၍ (၅)ရက်အကြာတွင် ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ မကြေငြာမီ ပင်လယ်နက်ဆိပ်ကမ်းမြို့ Poti သို့ ပေးပို့သည့် ရေနံပိုက်လိုင်း(၃)ခုအနက် တစ်ခုမှာ ရုရှားတို့၏ဗုံး ထိမှန်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဗုံးထိမှန်ချိန်၌ ပိုက်လိုင်းတွင် ရေနံများ မရှိဟု ဂျော်ဂျီယာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
တောင် Ossetia တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းရေးတပ်များနှင့် ပြည်သူများအတွက် လုံခြံုရေးကို ပြန်လည် ရယူပြီးနောက် စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကို အဆုံးသတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်ဟု အရာရှိများကို သမ္မတက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ရုရှားအနေဖြင့် ဂျော်ဂျီင်္ယာ၏ ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးစွာစိုးရိမ်လျက်ရှိပြီး မကြာမီအချိန်အတွင်း နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးနိုင်မည့် လက္ခဏာများ မရှိသေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အစောပိုင်းတွင် ရုရှားကုလသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး Mr.Vitaly Churbinက ပြင်သစ်မှ မူကြမ်းပြုစုသည့် လုံခြံုရေးကောင်စီ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်ခြင်း မရှိဟုပြောပါသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဟာကွက်များ ရှိနေသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဂျော်ဂျီယာသမ္မတ Mr.Mikheil Saakashvili သည် ဖင်လန်နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အဆိုပြုချက်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
ရုရှားသမ္မတက စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကို အဆုံးသတ်ရန် မကြေငြာမီ ဂျော်ဂျီယာ၏ Gori မြို့ကို ရုရှားစစ်လေယာဉ်များက ဗုံးကြဲခဲ့ကြောင်း နောက်ဆုံးသတင်းများအရ သိရပါသည်။ အစောပိုင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.Sergey Lavrov က ရုရှားအနေဖြင့် ဂျော်ဂျီယာ နယ်နမိတ်ထဲတွင် စစ်မဲ့ဇုံ ဖန်တီးရန် အလိုရှိကြောင်း၊ အပစ်အခတ်မရပ်စဲမီ ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဇုံမှာ သီးခြားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ်ကို ဂျော်ဂျီယာစစ်တပ်က ထပ်မံတိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် ကောင်းစွာလုံလောက်သော အနေအထားတွင် ရှိရမည်ဟု ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဆိုပါသည်။
BBC သို့ မျက်မြင်သက်သေများ၏ ပြောကြားချက်အရ တောင် Ossetia မြို့တော် Tskhinvali မှ ၁၀မိုင် (၁၅ ကီလိုမီတာ) ဝေးသည့် မြို့ထဲရှိ ဆေးရုံကို ဗုံးမှန်ခဲ့ရာ လူအများအပြား သေဆုံးသွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ Reuters သတင်းအေဂျင်စီ သတင်းထောက်က ပြောကြားရာ၌ ၎င်း၏ မော်တော်ယာဉ်ရှေ့တွင် ဗုံးများ ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းနှင့် Reuters သတင်းအင်ဂျင်စီ ဓါတ်ပုံဆရာက လမ်းများတွင် သေကြေဒဏ်ရာရနေသည့် လူများကို မြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ပြောပါသည်။ ရုရှားနှင့် ဂျော်ဂျီယာအစိုးရ အရာရှိများက ပြောကြားရာ၌ ရုရှားတပ်များသည် သီးခြားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နယ်မြေဖြစ်သည့် Abkhazia မှ ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ရာ ဂျော်ဂျီယာ အနောက်ပိုင်းရှိ Senaki မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဂျော်ဂျီယာ လုံခြံုရေးအကြီးအကဲ Alexandar Lomaia က ပြီးခဲ့သော အင်္ဂါနေ့တွင် ရုရှားတပ်များသည် Senaki မြို့မှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး Gori မြို့တစ်ဝိုက်နှင့် Zugdidi မြို့အပြင်ဘက်တွင် ကျန်ရှိနေသေးသည်ကို ပြောကြားကြောင်း The Associated Press သတင်းဌာနက သတင်းပို့ပါသည်။
Reported clashes (သတင်းပေးပို့သည့် တိုက်ပွဲနေရာများ)၊ Russian warships (ရုရှားစစ်သင်္ဘောများ)၊ Military base (စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်း)၊ Airbase (လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း)၊ Disputed territories (အငြင်းပွားသည့်နယ်မြေများ)၊ Baku- Tbilisi-Ceyhan pipeline (ရေနံပိုက်လိုင်း)
ဂျော်ဂျီယာ လုံခြံုရေးအကြီးအကဲက အင်္ဂါနေ့နံနက်တွင် Gori မြို့သို့ ရုရှားလေယာဉ်မှ အုပ်ချုပ်ရေး အဆောက်အအုံများနှင့် မြို့လယ်ခေါင်ရှိ လမ်းဘေးဈေးတစ်ခုကို ပစ်မှတ်ထား၍ ဗုံးကြဲ ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်ကို AP သတင်းဌာနက ဆက်လက်သတင်းပို့ပါသည်။
အမေရိကန်၏မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီး အနောက်နိုင်ငံများကိုလိုလားသည့် ဂျော်ဂျီယာသည် ရုရှားမှ တောင့်တင်းစွာ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ခွဲထွက်ရေးသမားများ လှုပ်ရှားနေသည့် တောင် Ossetia နှင့် Abkhazia တို့တွင် ၎င်း၏ဩဇာလွှမ်းမိုးရေးအတွက် ရည်ရွယ်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။ ခွဲထွက်ရေး သမားများ၏ အမြောက်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပြည်သူ(၁၀)ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် လွန်ခဲ့သော ကြာသာပတေးနေ့ညက ဂျော်ဂျီယာက စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့မှုမှ စတင်၍ တောင် Ossetia ၏ အခြေအနေမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဂျော်ဂျီယာက ရုရှားအား ခွဲထွက်ရေးသမားများကို ထောက်ခံအားပေးသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ပါသည်။
ဂျော်ဂျီယာ၏ သီးခြားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ Abkhazia တွင် ခွဲထွက်ရေးသူပုန်များက ဂျော်ဂျီယာတပ်များကို Kodori Gorge ဒေသတွင် ဆက်လက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါဒေသမှာ Abkhazia ၏ တစ်ခုတည်းသော ဂျော်ဂျီယာတပ်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသည့်နယ်မြေ ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ရုရှားသမ္မတ Mr.Medvedev က ၎င်း၏ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အား မိမိတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ ဂျော်ဂျီယာ အာဏာပိုင် များအား အင်အားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပြုလုပ်ရန် စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအပေါ် အဆုံးသတ်ရန် မိမိ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း၊ မိမိတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းရေးတပ်များနှင့် ပြည်သူများ၏ လုံခြံုရေးကို ပြန်လည်ရယူခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျူးကျော်သူများကို အပြစ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ကြီးစွာသော ဆုံးရှုံးမှုများကို ကြံုတွေ့ရရှိခဲ့ကြကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏တပ်များသည်လည်း ဖရိုဖရဲဖြင့် ပြိုကွဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မော်စကိုရှိ BBC သတင်းထောက် James Rodgers က ပြောကြားရာ၌ ဂျော်ဂျီယာတို့၏မြို့တော် Tbilisi ရှိ အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးရန် ရုရှားတို့အနေဖြင့် လိုလားသည့် လက္ခဏာ မပြသေးကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.Sergei Lavrov ကဂျော်ဂျီယာတို့အနေဖြင့် အင်အားအသုံးမပြု ကြောင်း ၊ တရားဥပဒေနှင့်အညီ တုပ်နှောင်ထားသည့် စာချုပ် စာတမ်းများတွင် မဖြစ်မနေ လက်မှတ်ရေးထိုးရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ Mr Lavrov က တောင် Ossetia ကို ဂျော်ဂျီယာတို့က တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအပေါ် အနောက်နိုင်ငံများက မည်သို့မျှ ဝေဖန်ပြောကြားခြင်း မပြုသည့်အတွက် မိမိအနေဖြင့် အကြီးအကျယ် စိတ်ပျက်မိကြောင်း ပြင်းထန်စွာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရုရှားသမ္မတက သတိပေးပြောကြားရာ၌ တောင် Ossetia တွင် ဂျော်ဂျီယာတို့အနေဖြင့် စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ထပ်မံ ပြုလုပ်ပါက သည်းခံမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ခုခံမှု သို့မဟုတ် အခြားကျူးကျော် တိုက်ခိုက်မှုများ ပြန်လည်ကြိုးပမ်းလာပါက နှိမ်နင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Gori မြို့အနီးရှိ BBC သတင်းထောက် Ms.Gabiel Gatehouse က ရုရှားသမ္မတ၏ ကြေငြာချက် မတိုင်မီ မြို့ပတ်ပတ်လည်ကို အမြောက်များဖြင့် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ပစ်ခတ်သည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း သတင်းပို့ပါသည်။ နယ်သာလန်အစိုးရ အရာရှိက Gori မြို့တွင် သေဆုံးသူများ အနက် မိမိတို့၏ ဒတ်ချ်လူမျိုး တီဗွီကင်မရာဆရာတစ်ဦး ပါ၀င်ပြီး ဂျာနယ်သတင်းဆရာတစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားပါသည်။ Gori မြို့သည် ဂျော်ဂျီယာ၏ အဓိက အရှေ့နှင့် အနောက် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တွင် တည်ရှိပြီး ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များအတွက် အရေးပါသောနေရာ ဖြစ်ပါသည်။
BBC သတင်းထောက်က Gori မြို့၏တောင်ဘက်တွင် ရုရှားတပ်များ၏ အရိပ်အရောင်ကို မမြင် မတွေ့ရသော်လည်း မြို့၏အပြင်ဘက် လမ်းမပေါ်တွင် စွန့်ပစ်ထားသည့် သို့မဟုတ် မီးလောင်ထားသည့် ဂျော်ဂျီယာစစ်တပ်၏ ကားအမြောက်အများကို တွေ့ခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Wednesday, August 13, 2008
ကျေးဇူး ကိုလင်းဦး. သတင်းတွေ အတွက်.
ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင်တော့ ရုရှားက ဂျော်ဂျီယာ ကို ခပ်ထောင်ထောင် မလုပ်နဲ့ ဦးကျိုးသွားမယ် ဆိုပြီး ကြိုပြီး နှိပ်ကွပ်လိုက်တဲ့ သဘောလို့ ထင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ကာလ အတွင်းကပဲ ဂျော်ဂျီယာကလည်း US ရဲ့ ဒုံးပျံကာကွယ်ရေး စနစ်ကို သူ့နိုင်ငံတွင်း တည်ဆောက်ခွင့်ပြုဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ် ဆိုတော့ ရုရှားကြီး နားရွက်တံထွေးဆွတ်ခံထိဖြစ်ပြီး အကွက်ပေါ်တာနဲ့ တွယ်ထုတ်လိုက် တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. အားလုံး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ရှိကြရင် အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ.